शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा भक्तजनको भीड /घोषणाभन्दा फितलो तयारी | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← यस बर्षको मान्हे पुरस्कार अनुराधा कोईरालालाई
बेहुली लिएर र्फकदै गरेको सवारी दुर्घटना,तीनको मृत्यु,५३ घाइते →
शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिमा भक्तजनको भीड /घोषणाभन्दा फितलो तयारी
Posted on 02/03/2011 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, फाल्गुन १८ – महाशिवरात्रिका अवसरमा बुधबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा भक्तजनहरुको भीड पशुपति मन्दिरमा लागेको छ । बिहान ८ बजेसम्ममा ५० हजार बढीले मन्दिरमा दर्शन गरिसकेको अनुमान गरिएको छ । झक्तजनलाई दर्शनका लागि सजिलो व्यवस्थापनि गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । भक्तजनको सुविधाका लागि पाँह हजार स्वंय सेवक र ती न हजार आठ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
घोषणाभन्दा फितलो तयारी
कोषले गरेको पूर्वघोषणा विपरित महाशिवरात्रि पर्वको तयारी फितलो देखिएको छ । कमजोर व्यवस्थापनका कारण पूर्वघोषणा अनुसार भोजन, पानी, दाउरा र औषधी व्यवस्था फितालो देखिएको हो । मंगलबार दिउँसैदेखि यस क्षेत्रमा भक्तजनको घुइँचो थियो ।
महाशिवरात्रीको पूर्वसन्ध्यामा विद्युतीय द्वारहरू र पण्डालले पशुपतिलाई सजाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा गीत, संगीत, भजन र नृत्यले गुञ्जायमान छ । पशुपतिको चार शिवालय, भकुण्टोल, गौशाला, मित्रपार्क र उमाकुण्डमा राखिएको विद्युतीय द्वारहरूले झनै रौनक थपेको छ ।
पशुपतिमा साधु तथा अन्य भक्तजनको घुइँचो बढेको छ । भारतको उत्तरप्रदेशबाट पछिल्लो १२ वर्षदेखि खजुरिया गाउँबाट श्रीमती पार्वतीसहित ५५ जनाको समूहमा आएका ५५ वषर्ीय रामसजन चतुवेदीले गत वर्षको झैं तयारी नभएको बताए । यात्राले गर्दा रुघा र ज्वरोले पीडित उनकी श्रीमती औषधी नपाएर चिन्तित थिइन् । कोषले घोषणा अनुसार सूचना केन्द्रको व्यवस्था र २२ वटा तातो पानी आउने धारा व्यवस्था गरेको छैन । अपांग र अशक्तका लागि विशेष दर्शनको व्यवस्था भएको थाहा पाएर श्रीमती सीतासहित आएका नुवाकोट समनटार-६ का नेत्रहीन गोविन्द ढकाल सूचना केन्द्रको अभावमा कहाँ जाने अन्योलमा थिए । उनले भने, ‘छिटै दर्शन गर्न पाइन्छ भनेर आएको हो, खै कता जाने ? थाहा भएन ।’ साधुलाई खाना दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो साधुहरूको छ ।
कोषको दाबी अनुसार करिब ६ लाख दर्शनार्थी मंगलबार साँझ सम्म काठमाडौं आइपुगेका छन् । साधुको संख्या करिब २ हजार रहेको अनुमान छ ।
गुठी संस्थान पशुपति गोश्वारा शाखा कार्यालयकी प्रमुख उमा आचार्यले मन्दिर परिसरभित्र बसेका साधुलाई सोमबार बेलुकादेखि दाउरा र भोजन एवं बाहिर बसेकालाई मंगलबारदेखि उक्त सेवा पुर्‍याइरहेको बताइन् । ‘हामीसँग दाउरा र भोजनको अभाव छैन,’ उनले भनिन् ।
महाशिवरात्री आवास तथा निःशुल्क भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार उपसमितिका संयोजक सुनीलकुमार वंशलले तयारीभन्दा अगावै भक्तजन आइपुगेको हुनाले समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘गुनासो आएपछि तिलगंगाको ६ हजार वर्गफिटको क्षेत्रमा खडा गरिएको पण्डालमा दुई संघ-संस्था र तिलगंगा आँखा अस्पतालको सहयोगले भोजन र पानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ रातिका लागि दुई हजार लिटर क्षमताको पानीका दुई ट्यांकर, घुनी बाल्न र आगो ताप्न दाउरा वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताए । नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेडले अन्तिम क्षणमा दाउरा नदिने भनेपछि मारवाडी संघ-संस्थाको सहयोगले प्रबन्ध मिलाएको वंशलले बताए ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक भरतबहादुर चन्दले गुठीलाई मागेअनुरूपको दाउरा उपलब्ध गराएको र कोषलाई समेत आवश्यकता अनुरूप दिने निर्देशन भइसकेको बताए ।
कोषले दर्जनौं संघ-संस्थाको सहयोगले भक्तजनका लागि वनकाली धर्मशालाभित्र आवास र भोजनको व्यवस्था गरेको छ । तिलगंगामा भेला पारेर नेत्रहीन, अशक्त र अपांगलाई पशुपतिको दर्शन गराउने कोषका सदस्यसचिव सुशील नाहाटाले बताए । कोषले यी समग्र कार्यका लागि ८ हजार ५ सय स्वयंसेवी परिचालन गरेको छ । पशुपतिको मूल मन्दिरको गेटमै तीन एमबीबीएस चिकित्सक र नर्ससहितको ५ बेडको अस्पतालको प्रबन्ध छ । त्यसैगरी मन्दिरको कोर क्षेत्रभित्र दुई स्वास्थ्य शिविरसहित दर्जनौं संघ-संस्था छन् ।
महाशिवरात्री सुरक्षा, दर्शन र स्वयंसेवा उपसमितिका संयोजक भोला सिटौलाले अन्योल परिस्थिति रहँदा रहँदै पनि गत वर्षको तुलनामा राम्रो तयारी भएको बताए । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत शिवरात्रीका बेला सुरक्षा व्यवस्था राम्रो गर्न निर्देशन दिएका छन् । गौशाला तथा चावहिल क्षेत्रका होटल तथा लज विभिन्न ठाउँबाट आएका भक्तजनले भरिएका छन् । कोषले करिब १० लाख भक्तजन आउने दाबी गरेकामध्ये ४० प्रतिशत भक्तजन मंगलबार रातिसम्म भित्रिसकेको सिटौलाले बताए । ‘विगतको तुलनामा भारतीय भक्तजन ५ सय प्रतिशतले बढेका छन्, पशुपति क्षेत्रमा भीड बढेको छ,’ उनले भने ।
मूल मन्दिरको पश्चिम गेटमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको संयुक्त सुरक्षा कमाण्ड पोष्ट राखिएको छ । सादा पोसाकका सात सयसहित झण्डै चार हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडांैका प्रमुख पुष्कर कार्कीले भक्तजनलाई बहुमूल्य गरगहना नलगाउन र आपराधिक तत्त्व देखेमा तत्काल नजिकको पोष्ट र एक सय नम्बरमा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महाशिवरात्रीमा बुधबार बत्तीसपुतली, गौशाला, रातोपुल, जयबागेश्वरी, मित्रपार्क, तिलगंगा वाग्मती पुल र गौरीघाट भित्रको क्षेत्रमा सवारी निषेध गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गौशालामा सुरक्षा निकायका मोटरहरू, देवउद्यानस्थित कोषको कार्यालयमा पासवाला सवारी साधन, तिलगंगामा दर्शनार्थी, तीर्थयात्री र विदेशी पर्यटकको गाडी र सिफल चौरमा दर्शनार्थी र तीर्थयात्रीको वाहनका लागि मात्र पार्किङको व्यवस्था छ । जथाभावी पार्किङ गरिएमा सवारी ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
दर्शन कताबाट ?
भक्तजनका लागि तिलगंगा चक्रपथ पुलबाट चार शिवालय पञ्चदेवल हुँदै दक्षिण ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मित्रपार्क गौरीघाट उमाकुण्ड-रुद्रगाडेश्वर हुँदै उत्तरतर्फबाट पनि मन्दिर प्रवेश गर्न सकिनेछ । जयवागेश्वरी-भुवनेश्वरीबाट गणेश मन्दिरसँगैको सानो ढोकाबाट कोर क्षेत्र हुँदै पश्चिमतर्फको सानो ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । उल्लेखित सम्पूर्ण मार्गबाट दर्शन गर्ने भक्तजनले मन्दिरको पश्चिम मूल ढोकाबाट मात्र बाहिरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
This entry was posted in धर्म संस्कृती/परम्परा, नेपाल समाचार. Bookmark the permalink.